Indlela Yokuba Ngutata Olungileyo: Imigaqo YeBhayibhile Emihlanu
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
Indlela Yokuba Ngutata Olungileyo
“Ndizibhude phi izingqi?” Lo ngumbuzo owawukhathaza uMzimasi * waseMzantsi Afrika. Nakuba wayezame ngamandla akhe onke ukuba ngutata olungileyo, wayesithi akucinga ngonyana wakhe oneminyaka eli-19 owayeyinjubaqa, azibuze enoba kukho okungakumbi engewayekwenzile kusini na.
Ngokwahlukileyo koko, kubonakala ngathi uTerry ohlala eSpeyin uye waphumelela. UAndrew unyana wakhe uthi: “Xa ndandisengumntwana, utata wayedla ngokundifundela iincwadi, adlale nam yaye wayendikhupha ukuze sibethwe ngumoya size sichithe ixesha kunye. Kwakusiba mnandi xa ndifunda kunye naye.”
Ewe kona, akukho lula ukuba ngutata olungileyo. Kodwa ke iBhayibhile inamacebiso anokuba luncedo. Kuye kwabanceda ootata abaninzi kunye neentsapho zabo ukusebenzisa amacebiso eBhayibhile. Makhe sithethe ngamacebiso eBhayibhile anokunceda ootata.
1. Chitha Ixesha Kunye Nentsapho Yakho
Njengotata ubabonisa njani abantwana bakho ukuba babalulekile kuwe? Ngokuqinisekileyo zikhona izinto obenzela zona, eziquka izinto ozincamayo ukuze ubondle uze ubanike nekhaya elifudumeleyo. Ubungenakuzenza ezi zinto ukuba bebengabalulekanga kuwe. Nakuba kunjalo, ukuba akuchithi ixesha elaneleyo nabantwana bakho, basenokucinga ukuba eyona nto ibalulekileyo kuwe ngumsebenzi, abahlobo bakho okanye ukuzonwabisa.
Utata ufanele aqalise nini ukuchitha ixesha kunye nabantwana bakhe? Umama uqalisa ukwakha ubuhlobo kunye nosana lwakhe kwalusesesibelekweni. Umntwana usenokuqalisa ukuva emva nje kweeveki ezili-16 ekhawulwe. Ngeli xesha, notata unokuqalisa ukwakha ubuhlobo nosana olungekazalwa. Usenokuphulaphula ukubetha kwentliziyo yalo, aluve xa lukhaba, athethe nalo aze aluculele.
Umgaqo WeBhayibhile: Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, amadoda ayebafundisa abantwana bawo. OoTata babekhuthazwa ukuba bachithe ixesha kunye nabantwana babo, njengoko sifunda kula mazwi eBhayibhile abhalwe kwincwadi yeDuteronomi 6:6, 7: “La mazwi ndikuyalela wona namhlanje amele abe sentliziyweni yakho; uze uwabethelele kunyana wakho yaye uthethe ngawo ekuhlaleni kwakho endlwini yakho, nasekuhambeni kwakho ngendlela, nasekulaleni kwakho, nasekuvukeni kwakho.”
2. Ootata Abaphumelelayo Ngabo Baphulaphulayo
Phulaphula ngenyameko uze ungagwebi
Ukuze ukwazi ukuncokola kakuhle nabantwana bakho kufuneka ukwazi ukuphulaphula. Kufuneka uzifundise ukuphulaphula kakuhle uze ungakhawulezi ucaphuke.
Ukuba abantwana bakho basoloko belindele ukuba uza kukhawuleza ucaphuke uze ubagwebe, kuza kuba nzima ukuba bakuchazele eyona ndlela bavakalelwa ngayo. Kodwa xa uphulaphula uzolile, ubonisa ukuba unomdla onyanisekileyo kubo. Nabo baya kuziva bekhululekile ukukuxelela oko bakucingayo.
Umgaqo WeBhayibhile: Ubulumko obufumaneka eBhayibhileni buye babanceda gqitha abantu abaninzi. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi: “Wonke umntu umele akhawuleze ukuva, acothe ukuthetha, acothe ukuqumba.” (Yakobi 1:19) Ootata abasebenzisa esi siluleko seBhayibhile bayakwazi ukuncokola nokuphulaphula abantwana babo.
3. Qeqesha Ngothando Uze Uncome
Kwanaxa unomsindo, indlela omqeqesha ngayo umntwana wakho ifanele ibonise ukuba uyamthanda yaye ulixhalabele ikamva lakhe. Unokumcebisa, umlungise, umfundise kwaye umohlwaye xa kuyimfuneko.
Ukongezelela koko, ingqeqesho isebenza ngakumbi xa utata eqhele ukubancoma abantwana bakhe. Umzekeliso wamandulo uthi: “Linjengama-apile egolide kwinto yesilivere ekroliweyo ilizwi elithethwe ngexesha elifanelekileyo.” (IMizekeliso 25:11) Ukunconywa kuyamakha umntwana. Abantwana bayavuya xa abazali babo bezibona izinto ezintle abazenzayo yaye bebaxabisa. Utata osoloko ebancoma abantwana bakhe xa benze into entle ubanceda bazithembe baze bangayeki ukuzama ukwenza okuhle.
Umgaqo WeBhayibhile: “Nina boyise, musani ukubacaphukisa abantwana benu, ukuze bangadakumbi.”—Kolose 3:21.
4. Mthande Uze Umhloniphe Umfazi Wakho
Indlela utata amphatha ngayo umfazi wakhe inegalelo kwimpilo-ntle yabantwana. Elinye iqela leengcaphephe zobomi babantwana lithi: “Enye yezona zinto zintle utata anokuzenzela abantwana bakhe kukuhlonela umama wabo. . . Xa abazali behlonelana, abantwana baziva bakhuselekile.”—The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children. *
Umgaqo WeBhayibhile: “Madoda, qhubekani nibathanda abafazi benu,. . Ngamnye wenu makamthande umfazi wakhe njengoko ezithanda.”—Efese 5:25, 33.
5. Wasebenzise Amacebiso AkwiLizwi LikaThixo
Ootata abamthanda ngokunyanisekileyo uThixo banokunika abantwana babo ilifa elixabisekileyo—ubuhlobo obusenyongweni noBawo wabo wasezulwini.
Emva kwamashumi eminyaka ekhulisa abantwana abathandathu, uAntonio oliNgqina likaYehova wafumana le leta eyayivela kwenye yeentombi zakhe: “Tata othandekayo, ndithi mandikubulele ngokundikhulisa nangokundifundisa kwakho ukuthanda uYehova uThixo, abamelwane bam kunye nesiqu sam. Wandibonisa ngokucacileyo ukuba uyamthanda uYehova kwaye nam uyandithanda. Enkosi Tata ngokuthanda uYehova ngaphezu kwayo nantoni na enye, nangokuphatha abantwana bakho njengezipho ezivela kuThixo!”
Umgaqo WeBhayibhile: “Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke nangamandla akho onke. La mazwi ndikuyalela wona namhlanje amele abe sentliziyweni yakho.”—Duteronomi 6:5, 6.
Licacile elokuba, ukuba ngutata kubandakanya okungakumbi kunezi ngongoma zintlanu, kodwa ke xa sithetha inyani, enoba ungazama kangakanani na ukuba ngutata olungileyo, ufanele wazi ukuba ayikho inzwana engenasiphako. Sekunjalo, ukuba usebenzisa le migaqo ngothando unako ukuba ngutata olungileyo. *
^ isiqe. 3 Amanye amagama kweli nqaku atshintshiwe
^ isiqe. 19 Enoba utata wohlukana nomama wabantwana bakhe, kuhle ukuba amphathe ngembeko nangesidima ukuze nabantwana babe nobuhlobo obuhle nomama wabo.
^ isiqe. 25 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngobomi bentsapho, funda incwadi ethi Imfihlelo Yolonwabo Lwentsapho, efumaneka nakwiWebhsayithi ethi-www.jw.org.
UTata Olungileyo Akasoloko Exakekile
USylvan waseBarbados, ngumqhubi webhasi kwisixeko saseNew York yaye uhlala nomfazi kunye noonyana bakhe abathathu. Umsebenzi wakhe awumnik’ ithuba lokuphumla, kuba usebenza ukususela emva kwemini de kube yintsimbi yesithathu okanye eyesine ekuseni. Uphumla ngoLwesine nangoLwesihlanu, aze aphangele ngoMgqibelo nangeCawa ebusuku. Nakuba kunjalo, uzenzela ixesha lokuhlala nabantwana bakhe.
USylvan uthi: “Kunzima kodwa ndiyazama. Kufuneka ndichithe ixesha elithile ndihoye umntwana ngamnye. Ixesha langoLwesine emva kwemini ndilichitha kunye nonyana wam omdala xa ebuya esikolweni. NgoLwesihlanu ndincokola nonyana ophakathi, aze yena omncinci ndimbekele intsasa yangeCawa.”
“Utata udlala nam aze andifundele iincwadi ebusuku.”—USierra oneminyaka emi-5.
“Sikhe sithi sisadlala, utata athi ‘kwanele ngoku, lixesha lokucoca.’ Ngamanye amaxesha, xa sigqiba kusebenza, uye athi ‘Ngoku lixesha lokudlala.’”—UMichael oneminyaka eli-10.
“Utata akazange avumele umsebenzi wakhe okanye ukuzonwabisa kumenze angakwazi ukuncedisa umama kwimisebenzi yasekhaya. Nangoku usapheka, ahlambe izitya, ancedise ekucoceni indlu kwaye uyamthanda yaye umphatha kakuhle umama.”—UAndrew oneminyaka engama-32.
Ukukhulisa Abantwana Umtshato Nentsapho